Diiwaanka ninka loo magacaabi rabo maareeyaha cusub ee Milan oo madmadoow soo galay! (Maxaa lagu helay?) – Gool FM
Diiwaanka ninka loo magacaabi rabo maareeyaha cusub ee Milan oo madmadoow soo galay! (Maxaa lagu helay?)
Raage September 16, 2016
(Milano) 16 Sebt 2016 – AC Milan ayaa markale ka fikiri doonta inay xilka maareeyaha isboortiga u magacaabaan Massimo Mirabelli kaddib markii uu diiwaankiisa madmadoow kasoo baxay.
Sid uu dhigayo MilanLive.it, dookha Marco Fassone uu doonayo inuu Milan ku keeno ninkii indha indheeynta laacibiinta ugu qaybsanaa Inter ee Mirabelli “ayaan qof kasta qancinin”, iyadoo ay sidoo kale muran dhalisay inuu ninkani ka imanayo dhanka Nerazzurri.
Furthermore, La Repubblica ayaa isna werinaya in ninkani uu ganaax 4 bilood ah kala kulmay xiriirka FIGC sanaddii 2011 isagoo markaa maareeye u ahaa kooxda Cosenza “kaddib markii lagu helay inuu sameeyay qandaraas been abuur ah oo ku fadhiya €67,193.13 qorshe qayb ka ahaa keenistii laacib [Fabio] Ceccarelli, si loo qariyo xaqiiqooyinka dhaqaale ee heshiiskan, iyadoo la qariyay inay tiradu ahayd €186,233”.
Naadigan Calabrese-ka ah ayaa dhibic laga xayuubiyay iyadoo ka dheeleysey Lega Pro Prima Divisione, halka Ceccarelli bil ciyaaraha laga joojiyay.
Mirabelli ayaa awalba mucaaradad ka wajahayay laacibiintii hore ee Milan oo qaarkood lagu wado in kooxda xil looga dhiibo, waxaana ka mid ah Albertini oo ayaan dhowayd Twitter-kiisa kusoo qoray kabshan u akhrismayay ”Ma Interista” isagoo ula jeeday iyo Guddoomiyaha cusub ee Milan iyo maareeyaha isboortiga ninka loo rabo ay soo wada mareen Inter.
Ancelotti oo xaqiijiyay in kooxdiisu ay dib u heshay seddex laacib oo muhiim ah ka hor kulanka Ingolstadt FC
GOOGOOSKA: SM Caen vs Paris Saint Germain 0-2 (Cavani oo ul la koray kurayada Caen)